Kenya oo 2010-kii xirtay ninka lagu tuhunsan yahay in uu dilay askarigii Ingiriiska - Sabahionline.com
Dhibanayaasha al-Shabaab oo cadaalad iyo taageero dawlad raadinaya
Kenya oo 2010-kii xirtay ninka lagu tuhunsan yahay in uu dilay askarigii Ingiriiska
Maajo 26, 2013
Mid ka mida tuhmanayaasha muhiimka ah ee dilkii askarigii Ingiriiska ahaa ee lagu dilay London ayaa waxa saddex sano ka hor lagu xiray Kenya isaga oo wax laga waydiiyay xiriir la tuhmay in uu la lahaa xag-jiriinta al-Shabaab, sidaana waxa Axaddii (26-kii Maajo) xaqiijisay xukuumadda Kenya.
Askari ka tirsan bilayska Kenya oo lagu dilay agagaarka xerada Dhadhaab
19 ku dhintay shil bas oo ka dhacay galbeedka Kenya
Bilayska Kenya oo qof lagu tuhmay argagixisannimo ku dilay Mombasa
Michael Adebolajo, oo 22-jir ah, ayaa Arbacadii laga duubay fiidiyoow isaga oo sida minddiyo dhiig leh iyo hilb-jar-jare isaga oo sheegaya in uu dilay Lee Rigby oo ahaa askari aan shaqo ku jirin.
Ciidamada Kenya ayaa 2010-kii Adebolajo su'aalo ka waydiiyay arrimo ku saabsan xiriir u la leeyahay al-Shabaab, isaga oo xiriir la lahaa tuhmanayaal kale oo ku sugan Mombasa, sida ay warisay AFP. Adebolajo ayaa la sii daayay laba maalmood ka dib markii la waayay wax caddeeyn ah.
"Waxa la qabtay isaga oo wata magac kale, magac been ah," ayuu yiri afhayeenka xukuumadda Muthui Kariuki. "Wax tallaabo ah kama aynaan qaadin maadaama lagu wareejiyay xafiiska maxalliga ah ee MI5."
Al-Shabaab ayaa soo qortay dhowr fariimood oo ay Twitterka ku soo gudbisay tan iyo dilkii askariga ee Arbacadii, lakiin marna sooma qaadin Adebolajo. "Toulouse, Boston, Woolwich...Xaggee baa xigi doonta? Kaliya awood la'aan iska daawo, tani waa mid hubaal dhici doonta. Waxa la gaaray waqtigii la idinka gooyn lahaa dambiyadii aad horay u gasheen!" ayaa lagu qoray mid kamida farriimaha, iyada oo sidoo kale lagu muujiyay weerarro dhawaan ka dhacay Faransiiska iyo Maraykanka.
June 18, 2014 @ 02:08:16AM
Reer Kenya waxaan leeyahay idinka ayaa wax kharribay. Markaa waa in aad waajahdaan.
Sharmaarke oo ku dhawaaqay golaha xukuumadda ee la soo baddalay
Ra'iisul-wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa Talaadadii (27-kii January)...
Nkaissery oo dardar-galinaya ammaanka soohdinta Kenya iyo Soomaaliya
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Xiriirinta Xukuumadda Qaranka Joseph ole Nkaissery ayaa ku dhawaaqay...
Hoggaamiyaha mucaaradka Tanzania oo lagu qabtay dibadbax
Bilayska Tanzania ayaa qabtay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka iyo 32 xubnood oo ka tirsan xisbiga...
Waaxda Baarista Dambiyada Kenya (CID) ayaa ugu yeertay Xoghayaha Guud ee Ururka Macallimiinta Ken...
Hoggaamiyayaasha Gobolka Narok ayaa Talaadadii (27-kii January) iska indhatiray amar uu Wasiirka ...
Madaxweynaha Dawlad-goboleedka Puntland ee Federaalka Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa...
Bilayska Maamulka Ku-meel-gaarkaha ee Jubba ee Soomaaliya (IJA) ayaa Talaadadii (27-kii January) ...